Potika tena efa hatry ny ela ny lalam-pirenena faha 34 anelanelan’Antsirabe sy Betafo amin’izao fotoana, ary raha sanatria ho tratry ny orana eo, dia izay no vita, hoy ny vahoaka. Raha tena laharam-pahamehana ho an’ny fitondrana amin’izao ny lalana, tsy tazanim-potsiny toy izao ny fahasimbany, ny volan’ireo mpikojakoja lalana rahateo aza moa tsy mbola voavaha hatreto hoy ireo mpampiasa iny lalana iny. Nahita maso ny fahasimbana ny minisitry ny asa Vaventy tamin’ny volana Jona 2021 raha nizara “titre” faobe tany Betafo. Vao haingana no nandalo teo ny filohan’ny Antenimierandoholona nanao fitsidiham-paritra, nefa dia mandalo fotsiny ity lalana ity. Nanakiana mafy ny minisitry ny Asa vaventy ny depiote voafidy tao Betafo tamin’ny IRD, ary nilaza fa efa ny lalana indray no ambany noho ny tanimbary, ary nanao antso avo ny mba hijerena azy ity. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 21 octobre 2021 20:37
Zaimaika : Ho vitaina mialohan’ny fetin’ny faran’ny taona
Miroso ny asa fanamboarana sy ny fanatsarana ny tsena Zaimaika Ambodifilao - Antananarivo Renivohitra. An-dalam-pahavitana ny trano, ny 90% amin’izany no efa vita, ary ho ezahina ho vitaina mialohan’ny fetin’ny faran’ny taona ny tsena, araka ny nambaran’ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina raha nijery ny fizotry ny asa teny an-toerana ny Alarobia 20 oktobra 2021. Ireo mpivarotra taloha tao amin’ny Zaimaika no voalohan-daharana hiditra sy hisitraka ny tsena vaovao. Nambaran’ny Talen’ny tsenan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, Randrianarisoa Rija fa tazomina hatrany ny maha Zaimaika azy amin’ny fivarotana sakafo. Hisy ny « parking » eny an-toerana, ary tsy asiana mpivarotra intsony ivelan’ny Zaimaika fa hampidirina an-tsena avokoa. (Jereo sary Tohiny)
mercredi, 20 octobre 2021 18:15
Marolambo : Mahatsiaro ho zanak’ikalahafa
Nitrangana haintrano goavana tao an-tananan’i Marolambo ny alahady 15 aogositra 2021. Roa volana aty aoriana, sady tsy nisy fanampiana azon’ireo traboina, no tsy nisy tompon’andraiki-panjakana mba tonga nampahery azy ireo, na eo aza ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga. Nisy loza nitranga toy izao tany an-toeran-kafa. Nidodododo ny mambra ny governemanta mampitraka ireo niharam-boina sy nanatitra fanampiana, fa i Marolambo kosa tsy mba nisy, toa zanak'ikalahafa ka nanao fanaraina ny zanak'i Marolambo. Distrika farany atsimo, ao anatin’ny Faritra Atsinanana i Marolambo ; 130km miala an’i Mahanoro. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 19 octobre 2021 07:11
Raharaha Danil RADJAN : Manahy mafy amin’ny fiandanian’ny fitsarana ny fianakavian’ireo olona voampanga
Tsy matoky ny Fitsarana intsony ny fianakavian’ireo voampanga amin’ny raharaha Danil RADJAN tao aorian’ny fandravana didy navoakan’ny Fitsarana tampony ny 24 Septambra 2021 teo. Nambaran’izy ireo fa voazimbazimba hatrany ny zon’ny voampanga satria dia efa nandeha teo ny vono mba ahazoana fieken-keloka tany am-piandohan’ny raharaha, ny fanosoram-potaka isan’andro amin’ny haino aman-jery sy ny famoahana vaovao mitanila sy manameloka sahady, fa indrindra ny tsindry atao amin’ny Fitsarana. Nanaitra ny maro misehatra ao amin’ny tontolon’ny Fitsarana tokoa mantsy ny sori-dalàna maro napetrak’ity raharaha ity. Raha tsiahivina ny toe-draraha, dia nisy famonoana teratany karana iray, Danil RADJAN, ny volana septambra 2020. Raha vaovao sy resabe nanintona no fahitan’ny be sy ny maro ny toe-draharaha dia fandikan-dalàna sesilany no fahitan’ny mpahay lalàna azy, satria hoy izy ireo tsy fanajana ny “présomption d’innocence” ny familiviliana ny saim-bahoaka natao tamin’ny fanamelohana maro samihafa tamin’ny haino aman-jery, sy tambazotra, ary ny fiparitahan’ireo tsiambaratelo marobe, vidéo sy fitanana an-tsoratra, dia tsy fanajana ny tsiambaratelon’ny famotorana (secret de l’instruction).
lundi, 18 octobre 2021 20:07
Faritra Atsinanana : Fanamboaran-dalana amin'ny alalan'ireo engins avy amin'ny filohampirenena
Nataon'ny Goverinora RAFIDISON Richard laharam-pahamehana ny fanatsarana ireo lalana mampitohy ny toeram-pizahantany. Vita tanteraka ny lalana mampitohy ny RN2 amin'ny tanànan'ny Manambato, ka vokatr'izany dia hisitraka tosika sy tantsoroka avy amin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy ny Faritra Atsinanana ireo mpandraharaha ara-pizahantany any an-toerana, ka ho hisy amin'io "vacances de Toussaint " ho avy io ny tolotra fihenambidy ahafahana miala sasatra sady mijery ny hakanton'ny Canal de Pangalanes, lac Rasoabe, lac Rasoamasahy, ary ny ao amin'ny Akanin'ny nofy. Vita latsaky ny 30 minitra ny lalana amin'izao raha adiny iray sy sasany teo aloha ny lalam-pirenena faharoa mihazo ny village touristique MANAMBATO (Canal des Pangalanes, lac Rasoabe, lac Rasoamasahy, Akanin'ny nofy).
lundi, 18 octobre 2021 08:12
Mpiasa mpamono valala : Sady tsy misitraka tambinkarama no mbola mahazo fandrahonana
Velon-taraina ireo mpiasa mpamono valala eto Madagasikara, saika manerana ny Nosy, fa nanomboka tamin'ny 2019 ka hatramin'izao, hoy izy ireo, tsy mba nisitraka tambinkarama na dia efa mihatra aman’aina aza ny asa. Valinteny an’avona toy ny hoe : “alaivo any amin'ny mpintantana teo aloha” no azon’ny mpiasa avy amin’ny mpitantana raha mba mangata-panazavana ny amin’ny zon’izy ireo hisitraka tambinkarama io, ary miampy fandrahonana sy sazy izay efa mihatra amin'ny mpiasa sasantsasany amin'izao fotoana izao . Nivoitra tamin’ny tamin’ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 13 oktobra 2021 teo fa mivoatra miharatsy ny fisian’ny andiam-balala eto Madagasikara ary ahiana hirongatra mihitsy aza satria manampy trotraka ny tsy fahampiana ara-tsakafo mahazo ny any amin’ny faritra Atsimo.
dimanche, 17 octobre 2021 20:07
RN44 Amboasary – Vohidiala : Misy fahatarana ny asa fanamboarana
Mandeha ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-44 (Amboasary - Vohidiala) saingy miaiky ny rehetra fa misy ny fahatarana. Nidina nijery ny fizotry ny asa tany an-toerana ny Minisitry ny Asa vaventy Hatrefindrazana Jerry sy ny Tale jeneraly misahana ny tetikasan'ny Filoham-pirenena Augustin Andriamananoro sy ireo mpiara-miasa aminy, niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Faritra Alaotra Mangoro ny alahady 17 oktobra 2021. Nanome toromarika ny Minisitra fa tokony ho vitaina araka ny fenitra sy ny kalitao ao anatin'ny fotoana voasoratra ao amin'ny bokin'andraikitra ny asa. Nanome toromarika ny orinasa manao ny lalana ny tenany mba hanampy ireo fitaovana ampiasaina hitsinjovana ireo mpampiasa lalana amin’ny fahavaratra.
dimanche, 17 octobre 2021 16:21
Antalaha ：Oratsimba miisa 37 no sarona ary nogiazana
Oratsimba (langoustes) miisa 37 no sarona ary nogiazana tao Anjiamangotroka Kaominina ambonivohitra Antalaha ny 14 Oktobra 2021. Fiaraha-miasan’ny sampandraharaham-paritry ny jono sy ny toekarena manga ao SAVA sy Polisim-pirenena any Antalaha no nahazoana ny vokatra. Mbola mikatona ny fanjonoana oratsimba ao anatin’ny Faritra SAVA ny 01 Oktobra ka hatramin'ny 31 Desambra 2021. Nomena ny fikambanana KALA sy Orchidée mitaiza zaza sembana sy sahirana ao Antalaha ireo oratsimba taorian’izay. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 17 octobre 2021 12:53
Fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary : Olana tsy mitsaha-mitombo eto Madagasikara
Olana tsy mitsaha-mitombo eto Madagasikara ny fanondranana an-tsokosoko ny harena voajanahary sy ny kolikoly mifandraika amin'izany. Araka ny filazan'ny TRAFFIC dia sokatra maherin'ny 21 000 no tratra teto Madagasikara mandritra ny fikasana hanondrana an-tsokosoko, teo anelanelan'ny taona 2018 sy 2021. Misy ankehitriny ny tetikasa vaovao maharitra telo taona mitentina 3,4 tapitrisa dolara izay natomboky ny governemanta amerikana amin’ny alalan’ny Sampandraharaha amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID), sy amin'ny anaran'ny vahoaka amerikana, ny 15 oktobra, hamahana ireo olana tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary sy ny kolikoly mifandraika amin'izany. Ny World Wildlife Fund (WWF) no lohalaharana mitarika ny tetikasan’ny governemanta amerikana Counter Corruption and Wildlife Trafficking (Ady amin’ny kolikoly sy ny fanondranana an-tsokosoko ny harena voajanahary ) izay vatsian’ny USAID vola, ary ahitana mpiara-miombona antoka maro toy TRAFFIC International, Transparency International Initiative Madagascar, ary Alliance Voahary Gasy. Hiara-miasa akaiky amin'ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny Ministeran'ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana lovainjafy ny tetikasa.
dimanche, 17 octobre 2021 12:44
Analamanga Park : Nisokatra indray rehefa nikatona aman-taonany
Nasiam-panitarana sy nohavaozin'ny Faritra Analamanga tanteraka ity toeram-pitsangatsanganana ity, izay efa nikatona mihitsy teo aloha. Maro ny foto-drafitrasa vaovao natsangana sy fialam-boly azo tanterahina ao an-toerana. Anisan'izany ny kianja fanaovana fampisehoana, ny toeram-pisakafoana, ny efitra fandraisam-bahiny, ny kianja filalaovana baolina kitra, ny basket ary ny volley-ball, ny tokontany filalaovana tsipy kanetibe, ny dobo filomanosana. Misy ihany koa ny toeram-pivarotana vokatra sy entana voafantina ary ny kilalao ho an'ny ankizy. Niverina nisokatra ny sabotsy 16 oktobra 2021 ny Analamanga Park, ho tosika amin'ny fizahantany. (Jereo Sary Tohiny)